Khelkudsansar.com | फिफा वर्ष खेलाडी : कसले मार्ला बाजी?
फिफा वर्ष खेलाडी : कसले मार्ला बाजी?
Posted on: October 18, 2017 | views: 244
लन्डन – अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकको अवार्ड आगामी सोमबार प्रदान गर्दैछ। लन्डनमा हुने आवर्डका लागि फिफाले गत महिना अन्तिम मनोनयन सार्वजनिक गरेको थियो। अवार्डको मुख्य चासो वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा छ। जहाँ स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अर्जेन्टायन फरवार्ड लिओनल मेसी, अर्को स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडका पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका ब्राजिलियन फरवार्ड नेइमार छन्।
पछिल्लो एक दशकदेखि मेसी र रोनाल्डोबीच वर्ष खेलाडीको अवार्ड घुमिरहेको छ। मेसीले अहिलेसम्म पाँच पटक र रोनाल्डोले चार पटक अवार्ड जितिसकेका छन्। नेइमारले भने अहिलेसम्म अवार्ड जित्न सकेका छैनन्।
मेसी र नेइमारले गत सिजन बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए। मेसी र नेइमारको बार्सिलोनाले ला लिगा तथा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि भने जित्न सकेन। यता, रियल म्याड्रिडले ला लिगा तथा च्याम्पियन्स लिग जित्दा रोनाल्डोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
अर्जेन्टिनालाई निर्णायक खेलमा जित दिलाएर सन् २०१८ मा रसियामा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा छनोट गराउन मेसीले उद्भुत खेल प्रदर्शन गरे। गत साता भएको दक्षिण अमेरिकी छनोट समूहमा छैटौं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिना प्लेअफका लागि पनि छनोट नहुने आशंका बढेको थियो। समुद्री सतहभन्दा २८ सय मिटरको उचाइमा रहेको क्युटो सहरमा भएको खेलमा मेसीले आफ्नो योग्यता फेरि प्रमाणित गर्ने क्रममा ह्याट्रिक गर्दै अर्जेन्टिनालाई विश्वकपमा छनोट गराएका थिए।
मेसीले दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा २१ गोल पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी बन्दै कीर्तिमान समेत बनाए। गत सिजन बार्सिलोनालाई स्पेनिस कपको उपाधि दिलाउने क्रममा पाँच गोल गरे। बार्सिलोनाले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। मेसीले गत सिजन ला लिगामा ३७ गोल गरेका थिए । मेसीको प्रेरणामा बार्सिलोनाले अन्तिम खेलसम्म उपाधि जित्ने सम्भावना जीवितै राखेको थियो।
मेसी चौथोपटक ला लिगामा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका थिए। साथै उनले गत सिजनमै बार्सिलोनाका लागि ५ सय गोल पूरा गरेका थिए।
रोनाल्डोको प्रेरणादायी खेलमा रियल म्याड्रिडले फिफा क्लब विश्वकप २०१६ को उपाधि जितेको थियो। जापानिज क्लब कासिमा एन्टलर्सविरुद्धको फाइनलमा रोनाल्डोले ह्याट्रिक गरेका थिए। उनले प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड समेत जितेका थिए।
गत सिजनको युरोपियन च्याम्पियन्स लिग रियलले जित्नुमा पनि रोनाल्डोकै योगदान रह्यो। रोनाल्डोले गत सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा १२ गोल गरे। उनले युभेन्ट्सविरुद्धको फाइनलमा २ गोल गरेका थिए। रोनाल्डोले गत सिजन च्याम्पियन्स लिगमा सय गोल पूरा गरेर इतिहास समेत रचेका थिए। रोलान्डोले रियलका लागि चौथो पटक च्याम्पियन्स लिगको ट्रफि उचालेका हुन्।
नेइमारले गत सिजन क्लब र देशका लागि उतिकै योगदान दिए। नेइमारको प्रेरणादायी खेलमा ब्राजिल फिफा विश्वकप २०१८ मा छनोट हुने पहिलो देश बनेको थियो। हाल फ्रेन्स क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनमा आबद्ध नेइमारले गत सिजन स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए। बार्सिलोनाका लागि नेइमारले गत सिजन सबै प्रतियोगिता गरी ४५ खेल खेलेर २० गोल गरेका थिए। नेइमारले गत सिजन गोलभन्दा बढी गोलका लागि पास उपलब्ध गराएका थिए। उनले क्लबका लागि २१ एसिस्ट गरे। नेइमारले गत सिजन बार्सिलोनाका लागि सय गोल समेत पूरा गरेका थिए। चार सिजनमा १ सय ७८ खेल खेल्दै नेइमारले सय गोल पूरा गरेका हुन्।
राष्ट्रिय टिमका लागि पनि नेइमारले ५० गोल पूरा गरेका छन्। नेइमारले ८१ क्याप जितेर ५२ गोल पूरा गरेका हुन्।
पुरुष टिमको प्रशिक्षक